Ukuhanjiswa Kwezimpahla Nezakhiwo | I-Eindhoven ne-Amsterdam
Ukuhanjiswa Kwezimpahla Nezakhiwo
UKUVULA KWAMAHHALA WOMNDENI
IMMIGRATION- & UMthetho WOKUGULA
IMITHETHO YOKUZIPHATHA KAKHULU (IP)
IMERGERS & ACQUISITIONS
I-PHILANTHROPY & CHARITY FoundATIONS
ISITHEMBISO KANYE NANGEMPELA YOKUTHENGA KWEMALI
UMTHETHO WOKUSEBENZA KWEZINDABA
I-EURASIA NE-CIS DESK
I-PHARMA & ISAYENSI YOKUPHILA
NETHERLANDS DUTCH BAR UKUXHANANA
Sinikeza ngenkuthalo izeluleko kumakhasimende amaDashi nakwamanye amazwe abatshala ezakhiweni ezahlukene zezindawo zokuhlala eNetherlands, njengamahhotela, izindawo zokuphumula, amaphrojekthi wokuhweba kanye nephothifoliyo yokuhlala.
CELA UKUSEKELWA LEZOBUCHULE
Umthetho wezindawo zokuhlala uqukethe zonke izici zomthetho eziphathelene nempahla engashukumi. Si- Law & More bayakwazi ukukusiza ngezeluleko zomthetho lapho kuphakama imibuzo noma izingxabano maqondana nokuthengwa nokuthengiswa kwempahla engasuki. Ngokungeziwe kulokho singakunikeza ngezeluleko zomthetho emkhakheni wezomthetho werenti.
Ngaphezu kwalokho, amaklayenti amaDashi nawezwe lonke Law & More bayasizwa futhi belulekwe ekuhlelweni kwezimali zabo zezezindlu zaseDutch nezamazwe aphesheya ngendlela enenzuzo kakhulu yentela ngokusebenzisa indlela yamandla amaningi. Ubuchwepheshe bethu bufinyelela ekutholakaleni kwefulethi ukuze kusetshenziswe kwangasese ukuxoxisana ngezakhiwo eziyinkimbinkimbi zezentengiselwano kanye nokuthengiswa kwezakhiwo.
Law & More isiza abaqashi kanye nabanini bomhlaba ekuvikeleni nasekuxazululeni izinkinga zomthetho. Kanye nerenti yendawo yokuhlala kanye nerenti yesakhiwo sesakhiwo nesakhiwo samahhovisi. Abaqashi kanye nabanini bomhlaba banezibopho ezikhethekile zomthetho. Lokhu kuqukethe umlingiswa olawulayo okusho ukuthi amaqembu angazifaka esikhundleni sawo izivumelwano zakho. Ngaphezu kwalokho, kunezinhlinzeko eziphoqelekile ngaphakathi komthetho wokuqasha. Umuntu angeke ahluke kule mithetho, ebheke phambili ukuhlose ukuvikela umqashi njengoba iyiqembu elibuthakathaka, ngesivumelwano. Uma ubekwe esimweni lapho umlingani wakho angahambisani nezivumelwano zakhe, kunezenzo eziningana ezingazama. Ezimweni ezinjalo ungasethemba ukuthi uzokunikeza ngezeluleko zomthetho ozidingayo.
Izibonelo zezihloko esingakusiza ngazo:
• Ukubhalwa kwesivumelwano sokuqasha uma ungumnikazi womhlaba
• Izimpikiswano ngokuchazwa kwesivumelwano
• Ukwenza isenzo uma umqashi noma umnikazi womhlaba engasebenzi ngokulandela izivumelwano ezenziwe
• ukunqanyulwa kwesivumelwano sokuqasha
Ukuphatha uzakwethu / Ummeli
Shayela ku +31 40 369 06 80
Izinsizakalo ze Law & More
Yonke inkampani ihlukile. Ngakho-ke, uzothola iseluleko sezomthetho okungukuthi ngqo olufanele inkampani yakho
Ngabe udinga ummeli okwesikhashana? Nikeza ukwesekwa okusemthethweni okusemthethweni Law & More
Siphatha izindaba eziphathelene nokwamukelwa, ukuhlala, ukuxoshwa kanye nabafokazi
Wonke usomabhizinisi kufanele abhekane nomthetho wenkampani. Zilungiselele kahle ngalokhu.
"Law & More Abameli
Inkinga yeklayenti ”
Isimo sengqondo esingenangqondo
Sithanda ukucabanga kokudala futhi sibheka ngalé kwezici zomthetho zesimo. Imayelana nokufika emnyeni wenkinga futhi uyixazulule endabeni enqunyelwe. Ngenxa yokungacabangi kwethu kwengqondo neminyaka yokuhlangenwe nakho kwamakhasimende ethu angathembela ekuxhaseni ngokomthetho komuntu siqu nangokufanele.
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yini Law & More angakwenzela njengefemu yezomthetho e-Eindhoven?
Bese usithinta ngocingo +31 (0) 40 369 06 80 noma usithumelele i-imeyili:
Mnu. UTom Meevis, ummeli ku- Law & More – tom.meevis@lawandmore.nl
Inqubo Yezikhalazo Zehhovisi
I-5612 AJ Eindhoven
I-T. + 31 40 369 06 80
I-1081 KL Amsterdam
I-T. + 31 20 369 71 21
Hit Enter to search noma ESC ukuze uvale